घरघरमा राहत पुर्याउँदै स्थानीय तह - Samriddha Online
घरघरमा राहत पुर्याउँदै स्थानीय तह
समृद्ध अनलाईन २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार २३:०३ मा प्रकाशित ( ४ महिना अघि) ६८७ पाठक संख्या
अर्जुनधारा, चैत २१ गते । विश्व कोरोना भाइरसको संंक्रमणको त्रासमा रहिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले चैैत १० गतेबाट राज्यभर लक डाउन गरेपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने धेरै विपन्न परिवारका सदस्यहरु अइँचो पइँचो गरेर बिहान बेलुकीको छाक टारिरहेका छन् । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा न एकका कमानसिंह मोते आज निकै हर्षित देखिन्थे । लक डाउन दोस्रो हप्ता बित्न लाग्दा स्थानीय सरकारले राहत सामग्री घर घरमा ल्याएपछि उनीमात्र नभएर अर्जुनधारा १ का दर्जनौँ परिवार खुशी भएका छन् ।
कमानसिंह शनिश्चरेमा शनिबार र खुदुनाबारीमा लाग्ने साप्ताहिक हाटमा साहुका बाख्रा लाने गर्छन् र आएको नाफाले आफ्नो जीविको गुजार्छन् । लक डाउनका कारण दुई हप्ता देखि हाट बजार बन्द भएसँगै व्यपारबाट आउने नाफा पनि बन्द भयो । दश दिन सम्म छर छिमेकसँग अइँचो पइँचोमा छाक टारिरहेका उनी नगरपालिकाले राहत उपलब्ध गराएसँगै ८२ वर्षिय कमानसिंह खुसी भएर स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
त्यस्तै गरी अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. १ की कविता बयलकोटी पनि टाङटिङ खोलामा बालुवा चाल्छिन् । लक डाउन सुरु भए सँगै उनको पनि घरको समस्या कमानसिंह कै जस्तो छ । उनी पनि राहतका सामग्री जनप्रतिनिधिबाट घरमै प्राप्त गर्दा मख्ख देखिएकी थिइन् । यसरी राहत सामग्री जनप्रतिनिधि बाट प्राप्त गर्दा आफ्नो अभिमतको कदर भएको र आफू जस्तै विपन्नलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।
विश्व कोरोना संक्रमणको आतंकमा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले गरेको लगडाउनका कारण विपन्न परिवारलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाले वडा नं. १ मा विपन्न परिवारका दनेल तामाङलाई राहत सामाग्री हस्तानतरण गरी नगरप्रमुख हरिकुमार रानामगरले उद्घाटन गरेका थिए । नगरप्रमुख रानामगरले कोरोना भाईसरको विषयमा विभिन्न अफवाह फैलाई त्रास बढाई रहेको अवस्थामा नगरपालिकाका जनतालाई सचेत बनेर घरभित्रै बस्न आग्रह गरेका थिए ।
नगरपालिकाले हरेक वडामा १ सय ५० परिवारलाई वितरण गरीने भने पनि वडा कार्यालयबाट ५ जना थप गरी वडा नं. १ मा रहेका १ सय ५५ विपन्न परिवारलाई १० केजी चामल, एक लिटर खाने तेल, एक केजी नुन, मुसुरो दाल र सवुन एक रहेको राहत सामाग्री वितरण गरिएको वडा नं. १ की जनप्रतिनिधि तुलसा पोख्रेलले बताईन् ।
लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाइरहेका विपन्न भोकभोकै बसिरहेको अवस्थामा अर्जुनधारा नगरपालिकाले विपद्कालीन बजेटबाट नगर क्षेत्रका १ हजार ६ सय ५० विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री वितरण सुरु गरेको हो । शुक्रबार नगरपालिकाले वडा नं. १, ५ र ८ मा विपन्नलाई राहत सामाग्री वितरण गरिएको थियो भने अन्य वडामा शनिबार देखि निरन्तर राहत सामाग्री वितरण गरिने बताईएको छ । नगरपालिकाले नगरपालिका भरी रहेका १ हजार ६ सय ५० विपन्न परिवारलाई १६ लाख आपतकालिन वजेटबाट राहत वितरण गरेको हो ।